I-TaxJar Yethula i-Emmet: Intela Yokuthengisa Intelligence Intelligence | Martech Zone
I-TaxJar Yethula i-Emmet: Intela Yezentengiso Intelligence Intelligence
NgoMgqibelo, Ephreli 4, 2020 NgoMgqibelo, Ephreli 4, 2020 Douglas Karr
Enye yezinselelo ezihlekisa kakhulu ze-e-commerce kulezi zinsuku ukuthi bonke ohulumeni basekhaya bafuna ukugxumela ebhodini futhi bazinqumele intela yabo yokuthengisa ukuze benze imali ethe xaxa esifundeni sabo. Kusukela namhlanje, sekuphelile Iziphathimandla zentela eziyi-14,000 e-United States ezinezigaba zentela yomkhiqizo ezi-3,000.
Umuntu ojwayelekile othengisa imfashini online akaqapheli ukuthi uboya abangeze kumkhiqizo manje uhlukanisa izingubo zabo ngokuhlukile futhi kwenza lokho kuthenga kuthengiswe ePennsylvania… izwe elingaqoqi intela yokuthengisa ezingutsheni, uma kungenjalo. Futhi leso yisibonelo esisodwa nje… lolu hlu olungapheli lwemithetho yentela luholela ezigidini zezindlela zokukhokhisa ngengozi inani elingalungile lentela yokuthengisa… futhi lokho kungafaka ibhizinisi lakho enkingeni.
Inqubo yokumaka umkhiqizo wakho ngamunye ngekhodi yentela yomkhiqizo efanele ingathatha amahora futhi idale ukukhathazeka okuningi kumuntu ophatha intela yakho yokuthengisa. Futhi akuyona inqubo yesikhathi esisodwa. Njalo lapho ufaka ama-SKU amasha kumxube wakho womkhiqizo, kufanele uqiniseke ukuthi ahlelwe kahle.
AbakwaTaxJar bamba le datha, futhi, uma kucatshangelwa ukuthi konke lokhu kucwaninga kumaphakathi kuya kumzuzu nge-SKU ngayinye, kungathatha ikhasimende elithengisa cishe ama-SKU angama-3,000 Amahora we-50 wokuhlukanisa imikhiqizo yabo.
I-Emmet: Intela Yokuthengisa Ubuciko Bokufakelwa
I-TaxJar ithuthukisiwe Emmet, okokuqala embonini uhlakaniphile ngokufanele irobhothi lokuhlukaniswa kwentela yokuthengisa. Eyakhelwe ngaphakathi ngonjiniyela be-TaxJar, i-Emmet isebenzisa ukufunda ngomshini ukonga isikhathi samakhasimende e-TaxJar ngokuzenzakalela ukuhlukanisa imikhiqizo yabo ngekhodi yentela.
Kusukela ekuqaleni kuka-2020, u-Emmet usekhombisile izinga lokuphumelela elingu-90% ngokuhlukanisa ngokunembile imikhiqizo yamakhasimende e-TaxJar. Nge-Emmet, ukuhlukanisa leyo mikhiqizo engu-3,000 kuthatha amahora ambalwa kuphela. Futhi ngenxa yokuthi inikwe amandla ngokufunda ngomshini, i-Emmet iba nobuhlakani futhi inembe kakhudlwana ngomkhiqizo ngamunye omusha ewuhlukanisayo.
I-Emmet yenza lula inqubo yokuhlukaniswa kwemikhiqizo, ithuthukise ukunemba futhi inikeze amakhasimende ethu nabalingani bethu ukuzethemba kokwazi ibhizinisi labo kusekelwa yinkundla yezobuchwepheshe yentela yokuthengisa enembile kunazo zonke futhi esezingeni eliphakeme emakethe.
U-Alec Carper, Umqondisi Wezobunjiniyela we-TaxJar
Njengamanje, u-Emmet usiza amakhasimende e-TaxJar ahlukanisa imikhiqizo yawo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-TaxJar. Ezinyangeni ezizayo, u-Emmet uzosebenza namakhasimende we-TaxJar asebenzisa i-TaxJar's SmartCalcs tax tax API noma abaqoqa intela yokuthengisa ngeziteshi zokuthengisa ze-eCommerce (njenge-Amazon, Shopify, BigCommerce, njll.)
Cela i-TaxJar Demo
IntelaJar inika amandla amabhizinisi e-eCommerce ukuthi akwazi ukuphatha ukuhambisana nentela yokuthengisa. I-TaxJar ngokuphelele yenza ngokuzenzakalela ukubalwa kwentela yokuthengisa, ukubika nokufaka futhi inikela ngohlelo oluphelele kakhulu lobambiswano kubeluleki bezobuchwepheshe, izinsizakalo kanye nezentela. Ngaphezu kwe-API yabo, i-TaxJar inokuhlanganiswa okukodwa ne-NetSuite, Magento, Shopify, Walmart, Amazon, BigCommerce, Ecwid, WooCommerce, Squarespace, Square, ne-Etsy.
Tags: aiAmazonApiI-BigCommerceI-EcwidukuhlanganisaMagentoi-netsuiteintela yokuthengisathengaisikwelesquaeveraceIntelaJari-walmartWooCommerce
I-Zapiet: Nika amandla ukulethwa nokugcinwa kwesitolo nge-Shopify
I-EDO: Ukukala Ukuzibandakanya Kwabathengi Ekukhangisweni Kwe-TV